युगसम्बाद साप्ताहिक - सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे�
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे�
Monday, 04.29.2013, 07:15pm (GMT+5.5)
० तपाईंहरू नेकपा–माओवादीसंग मिलेर सरकारबिरुद्ध आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, एकाएक सरकारसंग वार्ता गर्न पुग्नुभयो । वार्ताको नतिजा कस्तो आउने ठान्नुभएको छ ?
हामीले सरकारसंग एक चरणको वार्ता सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यो वार्ता अत्यन्त सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण अवस्थामा भएको छ । हामीले विशेष गरी मंसिरमा सम्पन्न हुनसक्ने निर्वाचनको सुनिश्चितताको निम्ति केही प्रश्न उठाएका हौं, कुनै शर्त राखेका होइनौं । यदि मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने यी यी मुद्दाहरूमा अहिलेदेखि नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसको पृष्ठभूमि भनेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रहेका मधेशी मोर्चाले उठाएका विषयहरू नै हुन् ।
हामी मुलुकको निकास निर्वाचनले मात्र दिनसक्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं र यसका लागि स्वतन्त्र सरकार चाहिन्छ भन्ने पनि त्यत्तिकै सत्य हो । हामीले त्यही कुरा उठाउँदै आएका थियौं । हाम्रो विमति सरकारप्रति नभएर सरकार गठनको प्रक्रियाप्रति मात्र हो । यो प्रक्रियालाई सच्याइएन भने यो सरकार चार दलको सिण्डिकेटको छायाँ जस्तो मात्र देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने अन्य दलले निर्वाचनमा भाग नलिन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई इंगित गरेर त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हौं ।
० त्यसो भए सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो भने तपाईहरू चुनावमा भाग लिनुहुन्छ ?
म तपाईंहरूलाई एउटा आग्रह गर्दछु कि हाम्रो माग एकपटक हेरिदिनुस् । भन्न खोजेको के हो भने पहिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्यो । दोस्रो कुरा भनेको संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो । नागरिकता, मतदाता नामावली लगायतका विषयहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ । केही विषयमा सरकार अगाडि बढेको छ । यसले मलाई खुसी तुल्याएको छ । संविधानमा जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरा उठेको छ । त्यो संवैधानिक प्रावधान हो र जनताको मौलिक हकका रुपमा रहेको छ । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
० तपाईंहरूले यी विषयमा सरकारसंग कुराकानी गर्नुभएको छ । के सरकारबाट यी माग पूरा हुन्छ भन्ने लागेको छ ?
यी विषयमा सरकार अत्यन्त सकारात्मक रहेको हामीले पाएका छौं । सकारात्मक यस अर्थमा कि सरकार साँच्चै नै निर्वाचन गराउन अघि बढिरहेको छ भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौं । निर्वाचन गराउनकै निम्ति हामीले उठाएका विषयहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहरलाई सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने यदि चुनाव हुने वातावरण बनेन वा चुनाव नै हुन सकेन भने कसले भाग लिन्छ ? अहिले हामी चुनाव गराउँछौं भन्ने दलहरूले पनि चुनाव हुनै सकेन भने के गर्छन् ? त्यस कारण चुनाव हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । चुनाव हुने अवस्था सिर्जना नगरेर कहीं चुनाव हुन्छ ? केवल हामीले चुनाव गराउन खोजेका थियौं तर फलाना फलाना दलले भाग नलिएर विथोलियो भनेर उम्किन खोज्ने जुन खालको राजनीतिक संस्कृति नेपालमा छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । आफूले कर्तव्य नगर्ने र अर्कालाई जिम्मेवारी नदिने प्रवृत्ति यहाँ विकसित छ ।
अहिले पनि सरकार चार दलको सिण्डिकेटको सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति भैरहेको छ तर यसको स्वामित्व लिन कोही पनि तयार छैनन् । जस्तो कि लोकमानसिंको नियुक्ति प्रकरणमा प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुभएको लिखित जवाफमा “चार दलको समितिको संवैधानिक आधार पनि छैन, वैधानिकता पनि छैन । यस्तो समितिले पठाएको सिफारिशका आधारमा किन मुद्दा चलाएको ?” भनेर जवाफ दिनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यही चार दलले हामीले सरकरााबनायौं, हामी निर्वाचन गराएरै छाड्छौं भनेर किन दावी गर्छन् ? यो द्वैध चरित्र अन्त्य हुनुपर्छ ।
हामीले के भनिरहेका छौं भने यो सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो । यदि सरकार चार दलको छायाँकै रुपमा रहने हो भने अन्य दलले किन चुनावमा भाग लिने ? सरकार निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ भन्ने तर चार दलको छायाँको जस्तो व्यवहार गर्ने अनि अरु दलले पनि उनीहरूले जे भन्छन् त्यही मान्दिनुपर्ने भन्ने पनि कहीं हुन्छ ?
० तपाईंहरूको माग नाजायज छैन । सरकारसंगको वार्ता सकारात्मक भयो भन्नुभयो त्यसो भए आन्दोलन स्थगित गर्नुभएको हो ?
हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेता हौं । कुनै पनि विषयको हल सकारात्क हिसाबले वार्ताबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो छ । हामी अत्तो मात्र थाप्ने हिसाबले आन्दोलनमा गएका पनि होइनौं । हामी त निर्वाचनलाई सार्थक हुनुपर्यो र निर्वाचन पक्कै हुनुपर्यो भनेर आन्दोलनमा गएका हौं ।
० त्यसो भए तपाईंहरू चुनावमा भाग लिनुहुन्छ । यतिबेला मधेशी दलहरू दुई धारमा छन् । चुनावमा मधेशी दलरुसंग तालमेल पनि हुन्छ होला हैन ?
तालमेल वा एकता विचार र व्यवहार मिल्नेहरूका बीच हुन्छ । तपाईंलाई थाहै छ– विजय गच्छारजीहरू एमाओवादीसंग सरकार गठन हुँदाको मोर्चामै सामेल हुनुहुन्छ । उहाँहरू एमाओवादीको एजेण्डामा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी मधेश, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै मोर्चामा छौं । हाम्रो मोर्चामा मधेशी मात्र होइन अन्य दलहरू पनि सामेल छन् । त्यसकारण मूल कुरा के हो भने मोर्चा वा तालमेलका लागि विचार मिल्नु आवश्यक छ । जोसंग विचार मिल्छ त्यससंग तालमेल हुन्छ ।